Nwa nke Kevin-Prince Boateng Akụkọ nke Na-enweghị Nkọwa Eziokwu:
Mbido EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Ghanian Nwa nke Kevin-Prince Boateng Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara aha na aha njirimara; "Nsogbu ahụ".
Anyị Kevin-Prince Boateng Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Nyocha nke Kevin-Prince Boateng Biography na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya, ndị nne na nna, nwunye (Jennifer Michelle), ndụ ndụ, ndụ onwe onye, ​​uru dị oke ọnụ na ọtụtụ eziokwu banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara maka ọrụ arụmụka ya mana ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Kevin-Prince Boateng nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a, n'atụghị egwu, ka anyị bido.
Nwa nke Kevin-Prince Boateng - Afọ ndị mbụ na ezinụlọ:
A mụrụ Kevin-Prince Boateng na 6th nke March 1987 na West Berlin, Germany. A mụrụ ya nne ya German, Christine Rahn na nna Ghanian, Prince Boateng, Sr.
Kevin-Prince ka bụ nwa mgbe nna ya hapụrụ ụlọ obibi n'ihi nsogbu alụmdi na nwunye. Ya mere, nne German ya, Catherine, na-arụ ọrụ ruo ọtụtụ awa iji lekọta obere Kevin-Prince.
Mụ na nwanne ya nwoke nke okenye, George, Boatengs toro na Berlin. George (nwanne nwoke okenye) na Kevin-Prince toro na mama ha na Wedding, agbụrụ dị iche iche na Germany.
Ha biri na cmpaghara ndị dara ogbenye ity mgbe nwanne ha nwoke nke obere Jérôme nọnyere nna ha na mpaghara bara ọgaranya.
A maara Kevin-Prince ịbụ “Nwa Ghetto” n'oge ọ bụ nwata n'ihi ike ya na mba niile na n'okporo ámá ya.
Ọ bụ ezie na Kevin na Jerome bi n'ebe dị iche, ụmụnne atọ ahụ nọ nso, ha ga-ezukọkwa na ngwụsị izu nakwa n'oge ezumike ụlọ akwụkwọ iji egwu egwu egwu.
Ọ bụ ezie na oge George dị ka onye egwuregwu bọọlụ agwụla tupu ọ malite, ụmụnne ya ndị nwoke abụọ ka na -amalite amalite.
E nyere ha abụọ ezumike na Hertha Berlin, na -abata n'ọkwa, banye na ndoputa na n'ikpeazụ ndị otu mbụ. N'ịbụ onye mbụ n'ime ha abụọ, Kevin-Prince bụ onye mbụ mere akara ya.
Ọ malitere ọrụ ntorobịa ya na Reinickendorfer Füchse tupu ọ kwaga Hertha BSC ebe ọ gụchara ọrụ ntorobịa ya. Kevin ruru ọrụ ya dị elu na Portsmouth, Milan na Schalke 04.
Kama Germany, ọ họọrọ isonyere ọbara nna ya site na ịnọchite Black Stars nke Ghana. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ọnye na-bụ Jennifer Michelle? Nwunye Kevin-Prince Boateng:
Ebe ọ bụ na ọ mara mma, Kevin-Prince nwere mmasị n'ebe ụmụ agbọghọ mara mma nọ gbara ya gburugburu dị ka sharks. Otú ọ dị, otu nwanyị chọtara ụzọ ya n'obi ya.
Na 2007, Boateng lụrụ nwunye ya na obi nwata, Jennifer Michelle bụ onye 3 afọ karịa ya.
Alụmdi na nwunye ahụ mere ụbọchị abụọ mgbe ọ bịanyere aka n'akwụkwọ maka Spurs na July 2007. Ọ dịlarị ime na ụbọchị agbamakwụkwọ. A mụrụ nwa Boateng, Jermaine-Prince Boateng n'otu afọ ahụ na 2007.
Ịgba Alụkwaghịm: As Ghana Soccernet etinye ya, ịghọ aghụghọ na-agbanwe agbanwe na nwunye ya dugara ịgba alụkwaghịm na 2011. Ọ bụ Kevin bụ onye dọrọ nwunye ya aka n'amaokwu ịgba alụkwaghịm mgbe ha nụrịrị ụka banyere ụzọ aghụghọ ya.
Mmanya na -aba n'anya na -eduga Boateng anọghị n'ụlọ nke butere nnukwu nghọtahie n'etiti mmadụ abụọ na -eduga n'ịgba alụkwaghịm obi mgbawa.
Kevin-Prince Boateng ghọrọ onye na-ese anwụrụ oge niile n'oge a. N'ezie, a hụrụ ya ka ọ na -a cigaretụ sịga na ihe ọ drinkụ rightụ ozugbo tupu ya emee nyocha ọgwụ ọjọọ.
Mkpakọrịta Boateng na Jenny bịara na njedebe mgbe ọ gbasịrị Ghana na 2010 World Cup.
Na 2016 Ghana midfielder, Kevin Prince Boateng malitere mmekọrịta na German na-egosi TV Presenter, Melissa Satta.
Kevin-Prince kekọtara eriri ya na mmemme mmekọrịta chiri anya na ụlọ ụka parish Stella Maris na Italy.
Ememe ahụ dị mfe mana mara mma hụrụ ụfọdụ n'ime ezigbo ndị enyi na ezinụlọ bịara. Ọ na -eyi uwe ọcha na -acha ọcha ka nwoke ya na -eyi uwe na -acha odo odo.
Ndị na-agba bọọlụ anọwo na ihe nlereanya ahụ ruo afọ anọ tupu alụmdi na nwunye ha wee nwee nwa ha nwoke, bụ Maddox Prince onye ghọrọ nwa akwụkwọ ahụ. Kevin-Prince nwere mmasị iji nwunye ya mara mma na ezumike.
Melissa n'ihu ememe agbamakwụkwọ ha gosiri na emume agbamakwụkwọ ahụ adịghị mkpa nye ya na Prince Boateng mana mgbe amụrụ Maddox, ha abụọ chere na ọ bụ naanị ihe kwesịrị ekwesị; ụdị nchebe maka ọmarịcha nwa ha na gluu iji mee ka ezinụlọ dịrị n'otu.
N'ụzọ dị mwute na n'oge na-adịbeghị anya, Kevin-Prince Boateng na Melissa Satta na-atụ egwu na ha na-enwe nsogbu ụfọdụ na mmekọrịta ha na afọ mbụ mana ha mechara mee ihe dị iche iche ma mee ka mmekọrịta ha sie ike.
Ndụ Kevin-Prince Boateng Family:
Dịka e kwuru na mbụ, Boateng nwere nne German na nna Ghana. Ọ si n’ezinụlọ bara ọgaranya.
Nna ya, Prince Boateng, hapụrụ Ghana na 1981 na-enwe olileanya maka ezumike na Germany, ebe ọ chọrọ ịmụ nchịkwa, enweghị ihe ịga nke ọma na ọ kwụsịrị ịkpa ọchị na ịrụ ọrụ dị ka onye nlekọta. N'okpuru bụ Prince-Boateng Snr na ụmụ ya nwoke mgbe ha dị obere.
Na akwụkwọ gọọmentị, aha ya bụ Kevin Boateng, mana ya onwe ya na-ahọrọ aha Kevin-Prince na-asọpụrụ nna ya, bụ Prince Boateng. Christine Rahn bụ nne Kevin-Prince.
A na-enyekarị ya otuto maka ịta ahụhụ mgbe di ya hapụrụ ya na nwa nwoke ọ mụrụ naanị, bụ Kevin. Taa, mgbaghara bụ iwu ọhụrụ. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ikwu na Christine adịghị nso nne Jerome Boateng Martina Boateng.
Nwanne nna nna Kevin-Prince bụ onye bụbu onye otu ndị otu mba Ghana na nna nna ya bụ nwanne nwanne nke onye German ama ama Helmut Rahn, onye nyocha nke ihe mgbaru ọsọ mmeri na 1954 FIFA World Cup Final.
George na ọkara nwanne Jérôme bụ naanị ụmụnne ya. E kwuru na nwanne nwoke nke okenye bụ onye kacha nwee nka, nwanne nwoke nke etiti emeela isi akụkọ kachasị na bọọlụ ụwa na nwanne nwoke nke ikpeazụ meriri iko mba ụwa na Champions League. Ha niile, ha na -agbakọta na ezi ezinụlọ.
N'agbanyeghị ihe ịga nke ọma nke Jérôme na Kevin-Prince, n'otu oge echere na George bụ onye kacha nwee amamihe n'ime mmadụ atọ ahụ.
Agbanyeghị, ọrụ ịgba bọl nke ya bụ naanị ihe ngosi ole na ole maka uwe amateur mpaghara. Mgbe ọ nọsịrị mkpọrọ n'ụlọ mkpọrọ, ọ tụgharịrị uche na ọrụ ịgba hip-hop.
IHE: (Nke a bụ George Boateng ka ọ ghara inwe mgbagwoju anya na onye ọzọ bụ George Boateng, onye Netherlands nke mba Ghana na-egwu maka Feyenoord, merie Njikọ Njikọ na Middlesbrough ma gbanwee maka Coventry City, Aston Villa, Hull City na Nottingham Forest).
Nye Jerome, The Bayern Munich (dị ka n'oge ederede) ọ dịghị mgbe ọ zoro ezo maka ịhụnanya papa ya na Ghana. Jerome nwere egbu egbu maka ala Afrika nke edere ya na Ghana.
Nwa nke Kevin-Prince Boateng gbakwunyere ihe ndị mere banyere akụkọ ndụ ya:
N'agbanyeghị ihe mgbaru ọsọ ya, Kevin-Prince nwere ọtụtụ ọmarịcha àgwà - nke gụnyere ụfọdụ ihe nzuzu Michael Jackson na-akpali nke ọ rụrụ na ememe mmeri nke Milan.
Eziokwu Kevin-Prince Boateng Tattoo:
Boateng bụ onye agbụrụ dị iche iche ma nwee akara ngosi nke maapụ Ghana na aha obodo ahụ na ogwe aka ya. Nke a bụ njikọ a na-ahụ anya na ihe nketa Ghana.
N'elu ọgịrịga ya niile, o nwere okwu ndị China nke na -egosi okwu ndị ahụ; ezinụlọ, ahụike, ịhụnanya, ihe ịga nke ọma na ntụkwasị obi.
Kevin nwekwara egbugbu ndị ọzọ n'elu ahụ ya na ikpere na -enye nsogbu nke na -egosi Spiderweb. Nke a butere ya 'Ududo Boateng' aha otutu.
Kevin-Prince Boateng Racism Akụkọ nke:
N'ime oge mbụ nke egwuregwu ahụ na uwe Aurora Pro Patria nke anọ nke Italiantali, ndị ojii ojii Milan nọ na-eme ihe ọjọọ nke ndị agbụrụ ụlọ.
N'agbanyeghị na Boateng na-eme mkpesa mgbe niile nye onye na-eme egwuregwu ahụ, ndị isi emeghị ihe - hapụ onye ọkpụkpọ ka o were aka ya.
Na 26th nkeji, Boateng kwụsịrị n'etiti-dribble, bulie bọl ma jiri iwe gbadaa ya na ndị na-agba ajụjụ a, tupu ọ pụọ na pitch ahụ, gosipụtara uwe elu ya.
Naanị nwayọ na-eto ndị Fans ya, ọ gbadoro ụkwụ na ndị ọgba bọọlụ gara aga, na-enweta nkwado na nkasi obi site n'aka ndị otu ya - niile n'ihu ama egwuregwu juru anya.
Omume ya mere ka ụjọ jide ya n'egwuregwu bọọlụ Italiantali niile. Boateng jupụtara na ozi nkwado na nkwanye ugwu sitere na ọnụ ọgụgụ dị n'ime na n'èzí egwuregwu ahụ.
Obi ike na nkwuwapụta ngwa ngwa n'ụzọ dị otu a bụ otu n'ime omume kacha ahụ anya megide ịkpa oke agbụrụ na bọọlụ na ebe nchekwa.
Ọ zara ya site n'ịgba bọl n'ime nkwụnye wee pụọ n'ọgbọ egwuregwu, ebe ndị otu ya sochiri ya.
E mechara kwụsịtụ egwuregwu ahụ, ndị egwuregwu na ndị na -ekwu okwu dị iche iche nọ n'ime egwuregwu bọọlụ toro omume ya ngwa ngwa.
Kevin-Prince Boateng Akụkọ nke na - Onye Na-eme Ego:
N'oge a gbara ajụjụ ọnụ na akwụkwọ akụkọ La Gazetta dello Sport, Boateng kpughere na ya echeghị na ọ bụ kpakpando, ma jụ ikwu banyere ego ma ọ bụ akụ na ụba.
Ọ bụ ihe ọha na eze mara na ndị ịgba ọsọ ndụ enwetawo akụ na ụba dị egwu site n'ọtụtụ azụmahịa, ndị na-akwado azụmahịa na ụgwọ ọnwa ihe karịrị afọ iri nke ọrụ ọrụ ya.
Boateng nke TV TV DStv na-akpọ Boateng bụ otu n'ime ndị egwuregwu kachasị nwee mmekọahụ n'Africa na-egosi ahịa ya dị ka onye ọkpụkpọ na ego.
N'ịga n'ihu na ọrụ ya, Boateng zụlitere ịṅụ ọgwụ ọjọọ n'ịzụ ahịa ya. Ọ ka na-ekwu na ọ ka nwere "Ihe dị ka okpu 200, gburugburu 20 jaket akpụkpọ anụ, na akpụkpọ ụkwụ 160".
Ihe ndi ozo ndi umuaka mara na ha azutara gunyere Lamborghini, Hummer na Cadillac, ha nile n’otu ubochi maka onu ogugu isii.
Kevin-Prince Boateng ekpughewo otu o si nọrọ ọtụtụ afọ na-eri oriri ma na-ala ọtụtụ ego ya n'iyi. N'okwu ya…
"N'ime afọ abụọ, ejiri m ego m niile azụ ụgbọ ala, elele anya, akpụkpọ ụkwụ, diski, n'ụlọ nri na ndị enyi bụ ndị na-abụghị ezigbo enyi ma ọlị," ọ kọwara. “Maka nwata nwoke dika m, onye tolitere na obodo dara ogbenye na enweghị ego, ọ dị egwu.”
Ọrụ Kevin-Prince Boateng na-akwa ụta:
Okposụkedi emi ẹkedọhọde enye nte kiet ke otu mme ekọn̄ emi ẹdude ke ini iso, Boateng ama enen̄ede ọfọn ke kpukpru nti n̄kpọ emi enye ekenyenede, ndien emi edi n̄kpọ emi enye oyomde ndidi ke usụn̄.
N'okwu ya: "M na-akwa ụta maka ọtụtụ ihe," o kwuru. “Mgbe m dị obere, anaghị m arụsi ọrụ ike n'ihi na m nwere ike ịdabere na nkà m. Nke ahụ abụghị ụzọ ziri ezi. A sị na m ga-arụsikwu ọrụ ike, ma ọ dịghị njọ mgbe ahụ n'ihi na abụ m onyeisi obodo m, nwee ego, bụrụkwa onye a ma ama. ”
Eziokwu nke Kevin-Prince Boateng - Na-ekwu Asụsụ Anọ:
Kevin-Prince Boateng na-asụ asụsụ anọ ekele maka oge ọ na-egwu na Europe. Ọ na -asụ Bekee, German, Italian, na Turkish nke ọma.
Ọ na-ekwukwa na ọ ghọtara French na Arabic, nke bụ ọmarịcha ama maka onye ọ bụla, yana njirimara bara uru maka onye egwuregwu na-agba ọsọ n'ụwa.
Kevin-Prince Boateng Akụkọ nke na - Kasị asị na Germany:
Na May 2010, Boateng na-egwuri egwu na Portsmouth FC na njedebe nke FA na-emegide Chelsea, mgbe ọ gbawara Michael Ballack, onye uwe ojii nke mba Germany.
Ballack mechara merụọ akwara ya, wepụrụ ya n'akwụkwọ ndekọ maka iko mba ụwa nke 2010.
Ihe merenụ bụ nnukwu arụmụka, ọkachasị nyere na Boateng na -ekwu na Ballack mara ya ụra n'ihu na egwuregwu ahụ. Nke ahụ akwụsịghị ndị egwuregwu bọọlụ German ebe niile ịkọcha aha Boateng ruo ọtụtụ ọnwa.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụAnyị Kevin-Prince Boateng Nwatakịrị Na-akọ akụkọ ọzọ akụkọ ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.